Oromiyaa iddo adda addaatti Baratoonni Fi Jiraatonni Guyyaa Hardhaa Baratoota oromo University Waldiyaati Wareegaman Gadda Itti Dhagahamee ibsatani - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromiyaa iddo adda addaatti Baratoonni Fi Jiraatonni Guyyaa Hardhaa Baratoota oromo University Waldiyaati Wareegaman Gadda Itti Dhagahamee ibsatani
Oromiyaa iddo adda addaatti Baratoonni Fi Jiraatonni Guyyaa Hardhaa Baratoota oromo University Waldiyaati Wareegaman Gadda Itti Dhagahamee ibsatani Alaabaa Gadi Kaleessuudhaan Ibsatanii
JiruUnity is strength. Tokkummaan jabinaa fi humna
Oromiyaa iddo adda addaatti Baratoonni Fi Jiraatonni Guyyaa Hardhaa Baratoota oromo University Waldiyaati Wareegaman Gadda Itti Dhagahamee ibsatani Alaabaa Gadi Kaleessuudhaan Ibsatanii Jiru
#WarraaqsaOromoo– Kun warraaqsa Oromoo magaalaa Walisootti guyyaa har’aa gaggeeffame.
#WarraaqsaOromoo– Barattootnni Oromoo godina Jimmaa, aanaa Maannaa, ajjeechaa fi roorroo barattoota Oromoo Yunivarsitii Waldiyaa irartti raawwatame balaaleffatan!! Gadda isaanitti dhagayames ibsatanii jiru.
#WarraaqsaOromoo-Barattoonni Oromoo Ciroos ajjeechaa fi roorroo barattoota Oromoo Yunivarsitii Waldiyaa irratti gidduu kana rawwaatame warraaqsa Oromoo gaggeessan irratti balaaleffatan.
#OromoMovement-Haramaya University students have strogly condemned the killings of innocent Oromo students at Woldia University.
#WarraaqsaOromoo-Harargee Bahaa Magaala Kombolchaatti mormiin ajjechaa ilmaan Oromoo irratti rawwatamaa jiru godhamaara.
#WarraaqsaOromoo-Barattoonni qophaayinaa fi ayiskulli magaalaa ciroo hiriira ba’uun oboleeyyan isaani worra naannoo amaaraa keessatti ajjeefama jiranif sagalee dhageesisani galan galanni keessan bilisummaa isinif hata’u jennan
#WarraaqsaOromoo-Barattootni Oromoo Yunivarsitii Odaa Bultum ajjeechaa barattoota Oromoo irratti raawwate jabeessanii balaaleffatan
Baratoota Magaalaa Galamsoo
Ajjeechaan Baratoota fi Ummata Oromoo Irraa HaaDhaabbatu!
#WarraaqsaOromoo-Arsii Lixaa Magaala Nageellee Ajjeechaa Suukkaneessa university Waldiyaatti ilmaan Oromoo irratti rawwatte balaalefachaa jiru.
“Tarkaanfiin madaalawaa ta’e yoo hin fudhatamne saba Oromoo qofa osoo hin taane saboota biyya kanaa hunda aarsaa guddaa kanfalchiisa”
-Pirofeesar Mararaa Guddinaa
Taateen Yunvarsiitii Waldiyaatti barattoota Oromoorra gaheen paartiinsaanii gadduu kan himan Pirofeesar Mararaa Guddinaa, mootummaan taateewwan akkanaa hataattamaan fala itti kennuu baannaan sabni biyya kanaa waliin jiraachuufuu rakkoo keessa gala jedhan.
“Gochi akkanaa kuni yeroo tokko qofa miti, irra deddeebi’amaa jira. Barataa keenyas haa ta’u kan saba biraa, yoo miidhamu mootummaan saffisaan tarkaanfii gitu fudhachuu baannaan biyyi kuni gara hin taanetti deemaa jirti” jedhan.
Barattoonni Oromoo miidhaa gahe kana tasgabbiidhaan hordofanii barumsa isaanii osoo itti fufanii bayeessadha jedhan. sababnisaas miidhaan kuni akkuma biyyaattiitti dhufe jedhan.
“Nutis karaa siyaasaa irratti hojjenna. Warri siyaasa akkanaa raawwatan galanii nagaan taa’urra jiru. Mootummaan Amaaraas waan kanaaf itti gaafatamaa ta’uu qaba. Warra kana raawwate seeratti dhiheessuunis dirqamadhas” jedhan.
Gochoonni akkanaa akka babal’ataniif mootummaan federaalaas ta’e kan naannoo rakkoo mataasaanii qabaachuus himan.
Adeemsi akkanaa akka salphaatti ilaalamee akkuma baratame ni callisama taanaan garuu gochoonni akkanaa yeroo dhihootti to’annaa mootummaatiin ala akka ta’u beekamuu qabas jedhan.
Tarkaanfiin madaalawaa ta’e yoo hin fudhatamne saba Oromoo qofa osoo hin taane saboota biyya kanaa hunda aarsaa guddaa kanfalchiisa jedhan.
Tarkaanfiiwwan akkanaa maaliif saba Oromoo irratti fuullefate gaaffii jedhuuf ” Rakkoon karaa lamadha. Sochiin jijjiiramni fide kuni sochii qeerrooo Oromooti. Adeemsa Kanaan yoo itti fufe Oromoon biyya nurraa fudhachuufi jedhanii warra yaaddoo keessa galantu jira. ”
“Inni lammataa mootummaanis Oromoo keessaa waan baheef warri kaan gara Oromoo gorte yeroo jedhaniin karaa walakkaa dhaabbatee yoo rakkatan argina.” Jedhan.
Irra caalaatti Oromoorratti dhimmootni hedduun kan fuullefatame garuu “Oromoon akka kana duraatti buluu didee jijjiirama haaraa mirgasaa ittiin eegsisuu danda’u fudhatee gara fuuladuraatti deemaa waan jiruuf. Innimmoo warra biyya kanarra akka barbaadan burraaqaa turanitti yaaddoo waan ta’eefi” jedhan. Yaada BBC Afaan Oromoof kennanirraa fudhatame.
#WarraaqsaOromoo-Barattoonni qophaa’inaa Baatuu ajjeechaa barattoota Oromoo yuunivarsiitii Waldiyaatti raawwatane jabeessanii balaaleeffataa jiru
#WarraaqsaOromoo-Hararagee Lixaa Magalaa Baddeessa
Barattoonni mormii godhaa jirani. Ajjechaan Barattoota Oromoo haa dhaabatu.. Komaandii poostiin Lixaa fi kibba Oromiyaa irraa haa ka’u.